अस्वभाविक मूल्य बृद्धि नियन्त्रण गर – Janaubhar
अस्वभाविक मूल्य बृद्धि नियन्त्रण गर
प्रकाशित मितिः बुधबार, जेष्ठ २३, २०७५ | 282 Views ||
स्थायित्व बोकेको यो सरकार प्रति जनताको आशा धेरै छ । लामो संक्रमणकालको राजनीतिबाट उत्पन्न अस्थिरता, अराजकता र वेथितिको अन्त्य गदैं विकास र समृद्धिको ढोका पनि यहि सरकारले खोल्छ भन्ने अपेक्षा पनि आम जनताको छ । तर एकपछि अर्को गदैं पेटूोलियम प्रदार्थमा निरन्तर मूल्य बृद्धि हुँदै जानुले भने मान्छेको मनलाई नराम्रोसँग झस्काएको छ । एकै महिनामा दुई पटक, तीन पटक गरी भइराखेको मूल्य बृद्धिले सर्वसाधारण नागरिक मर्कामा परेकाछन् ।
नागरिकहरुले सर्वसुलभ ढंगले सेवाको अपेक्षा गरिराखेका बेला मूल्य बृद्धिको भार खेप्नुले सरकारको बोली र व्यवहार बीच भिन्नता देखापर्न थालेको अनुभूति सर्वसाधारण नागरिकहरुले गर्न थालेकाछन् । सरकारले नेपाल आयल निगममा हुने अनियमितता र चुहावट रोक्नलाई लाग्नुको सट्टा जनतालाई थप सास्ती दिने गरी पेटूोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्नु गलत कदम हो । यस्तो कदमले जनतालाई सास्ती र पुनः निरास अवस्थातिर मात्र धकेल्ने छ । जनता चाहन्छन सरकारले नेपाल आयल निगमले जग्गा खरिद प्रकरणमा करोडौं रुपियाँ घोटाला गर्ने दोषीलाई कारबाही गरोस् । निगमलाई सधैं घाटामा देखाएर नाफा भरी कुम्ल्याउने भष्टहरुलाई निलम्बन गरी जेल हालोस् । ठग र कालाबजारीहरुलाई दण्डित गरोस् ।
सर्वत्र जरा गाडेको सिण्डिकेट तोडियोस् र नोकरशाही कर्मचारीतन्त्रको अन्त्य होस् । तर यसको विपरित काम सरकारले गर्न थाले यसलाई कसरी जनअपेक्षाको सरकार मान्ने ? प्रश्न उठ्न थालेको छ । जनताको दैनिक जीवन कष्टप्रद छ । हरेक बस्तुको जब मूल्य बृद्धि हुन्छ त्यसको पहिलो असर सामान्य गरिब किसान माथिनै पर्न जान्छ । जो सँग मूल्य बृद्धिलाई थेक्न सक्ने कुनै आम्दानी वा रोजगारी छैन । व्यापारी,ठेकदार वा जागिरेलाई मूल्य बृद्धिको खास असर परिरहेको हुँदैन,जति असर सामान्य जनतालाई परिरहेको हुन्छ । सरकारले बजेट ल्याउँदा जनताका जनजिविकाको सवाललाई केन्द्रमा राखेर ल्याउन सक्नुपर्छ र मात्रै त्यसले आधारभूत वर्गसम्मलाई छुन सक्छ र जनतालाई उत्साहित बनाउन सक्छ । सरकारको बजेटले साधारण जनताको दैनिकीलाई नछुने तर बस्तुमा भने मूल्यबृद्धि भइराख्ने कुराले सरकार प्रति जनसाधारणको विद्रोह मात्र उत्पन्न हुन्छ सर्मथन हुदैन् । कम्तिमा त्यो दिशातिर यो सरकार उन्मुख नहोस भन्ने कामना आम नेपालीको छ ।
जनतालाई मर्का पर्ने गरी र बोझ थपिने गरी सरकारले मूल्य बृद्धि गर्नु हुदैन् । बरु सरकारले आयल निगम भित्र हुने अनियमितता, कमिसनखोर र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ध्यान दिनुपर्छ । आयल निगमबाट हुने चुहावटलाई रोक्न मात्र सके सरकारले घाटा पनि व्यहोर्नु पदैनथ्यो र जनताको दैनिकी असहज हुँदैनथ्यो । सरकारले यतातिर ध्यान लगाएर तत्काल यो मूल्य बृद्धि फिर्ता लिनु पर्दछ । अब पनि अनियमितता र व्यथिति नहटि जनताको ढाड मात्र सेक्कि राख्ने हो भने जनताले ७० बर्ष दुःख,कष्ट र वलीदान गरेर ल्याएको गणतन्त्रको अर्थ के हुन्छ र ? तसर्थ वास्तविक जनताको प्रतिनिधिको रुपमा उभिएको यो सरकार जनताको जीवन प्रति बढि उत्तरदायी र संवेदनसिल भएर चल्न जरुरी हुन्छ । माथि जानेहरुले तल हेर्न सक्नुपर्दछ । तल नहेरे माथि मात्रको थायित्व हुन सक्दैन भन्ने कुरा सरकारले र त्यसका संन्चालकहरुले यथास्रिघ बुझि आफूलाई जनताकै प्रतिनीधिका रुपमा उभ्याउन सक्नुपर्दछ । अनियमित रुपले पेटूोलियम प्रदार्थमा भइराखेको मूल्य बृद्धिलाई रोक्नु पर्दछ ।
Prevहरेक व्यक्तिले राजनीति सिक्नुपर्छ र गर्नुपछर्,
Nextसाग बोकेर तुलसीपुर–हापुरे यात्रा